Waxaan tijaabinay Headphones-ka cusub ee Energy Sistem 2 sameecadaha dhagaha-badan | Wararka IPhone
Kariim Hmeidan | | Qalabka IPhone, Noticias
Hagaag, tikniyoolajiyaddu waxay aad ugu badan tahay joogitaanka guriga, laakiin cidina ma dhihi karto looma isticmaali karo in waqtiga dibedda lagu qaato, iyo waqtiga ka wanaagsan xagaaga xagaaga in dibedda loo baxo oo waliba loo raaxeeyo tikniyoolajiyadda. Markasta oo aan inbadan haysanno Qalabyada kuwa aan jecel nahay oo aan dibedda ku isticmaali karno. Waxaan ka fekeri karaa tusaalooyin ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ugu horumarsan uguna fudud suuqa, ilaa sameecadaha dhagaha fudud oo aan ugu raaxeysano muusigga aan jecel nahay. Oo maxaan isku khiyaanaynaynaa nafteena, mararka qaar muusig wanaagsan iyo meel wanaagsan oo aan joogno ayaa nagu filan inaan ku raaxeysto.
Maanta waxaan kuu keenaynaa dib u eegis ku saabsan Headphones 2 ka Energy Sistem, samaacadaha cusub ka brand caan Alicante. Qaar ka mid ah sameecadaha Bluetooth-ka dhegta badan inay mooddo. Boodka ka dib waxaan kuu sheegi doonaa wax kasta oo aan ka helay isku dayga kuwan cusub ee Dhagaha Tamarta Sistem 2, samaacado dhegaha la isku dheeli tiran oo aad u qiimo badan.
1 Sameecado jaban oo aan qaali ahayn oo loogu talagalay moodada
2 Weligaa ha ka maqnaan muusikadaada
3 Xagee laga iibsadaa sameecadaha dhagaha la '2 headphones wireless ka Energy Sistem
Sameecado jaban oo aan qaali ahayn oo loogu talagalay moodada
Sida laga soo xigtay ragga ka socda Sistem-ka Tamarta, kuwan sameecadaha sameeya 2 ayaa leh qaar Darawallada 40mm oo leh jawaab celin soo noqnoqota 40 ilaa 20.000 Hz, ayaa dhagta ka weyn markaa waxay kaa dabooli doonaan dhagtaada oo dhan, waa wax la mahadiyey maadaama ay tahay nooc gooni ah oo go'doomin ah oo iyaga ka dhigaysa mid aad ugu raaxeysaneysa, ma ahan sida dhagaha madaxa wax lagu xiro ee dhagaha dusheeda lagu dhejiyo, taas oo keeneysa inay waqti nagu dhibtaan.
Ku saabsan dhawaq waa inaan dhahaa qiimaha headphones-kan (.29,90 XNUMX) waa la aqbali karaaKaalay, haddii aad tahay dhagaystayaal dhammeystiran oo raadinaya faahfaahinta ugu yar ee qalabka ka dhawaajinaya heestaada, ka carar kuwan sameecadaha dhagaha ee 'Energy Sistem Headphones'. Waxoogaa bass kor u kacay sida ay badanaa u dhacdo kiisaskan, iyo treble isku dheelitiran. Waxa iga yaabiyey ayaa ah in iPhone 8 (iOS 12 Beta) Wax dhib ah igama gaarin jaban dhawaaqa, wax aad ugu badan sameecadaha dhagaha ee Bluetooth.
Sida for xakamaynta ka kooban sameecadaha dhagaha la 'Waxaan kuu sheegi doonaa inay leeyihiin fasalada soo socda: a + badhanka, - badhanka, iyo badhan leh goobada gundhigga kaas oo sidoo kale noo oggolaan doona inaan ku baaqno Siri. Iyaga ayaynu ka bixi karnaa heesta, ka jawaabi karnaa wicitaannada, ama waxa aannu kuu sheegayno inaad u yeedho kaaliyahayaga dijitaalka ah.
Weligaa ha ka maqnaan muusikadaada
Shaki la'aan mid ka mid ah waxyaabihii aan sida aadka ah uga jeclaa kuwan sameecadaha dhegaha 2 waa wax aan had iyo jeer ka raadsado samaacadaha dhagaha la 'laakiin aan waligood helin: suurtagalnimada in loo isticmaalo iyaga oo leh fiilo, taas oo ah, sii wad isticmaalkooda mar haddii ay baterigu ka dhammaadaan. Haa, waa u qalantaa in taleefannada casriga ah ee ka yar iyo kuwa kayarba ay ku jiraan wax soo saar mini-jack ah, laakiin waxaa jira qalabyo badan oo suuqa kala socda oo awood u leh inay adeegsadaan ... In Sameecadaha Dhagaha ee 2 ay ku jiraan cod ku soo biirinta mini-jack waa wax la qiimeeyo maaddaama ay kaa fogaaneyso inaad ka dhammaato heesaha meel kasta oo aad tagtid.
Iyo sidii dhibic gooni ah oo aan kaaga sheegi lahaa naqshadeynta kuwan sameecadaha sameecadaha 2 ah, naqshad na soo xusuusisay noocyo kale, waxa aan rabo inaan kuu sheego ayaa ah Headphones-yadaani 2 ee ka socda Sistem-ka Tamarta ayaa ah sameecadaha dhagaha si ay u noqdaan kuwo moodada, Naqshad caan ah oo aan kaa dhigi doonin inaad dareento dariiqa. Waxaa laga heli karaa Beige, Buluug, Cagaar, iyo Casaan, dhammaantoodna waxay leeyihiin qaab isku mid ah oo balaastig ah oo nagu dhiirrigelinaya waxyaabo badan oo tayo leh iyo suufyo maqaar oo isku darma.
Xagee laga iibsadaa sameecadaha dhagaha la '2 headphones wireless ka Energy Sistem
Haddii lagu qanciyey, ama haddii aadan sidaas ku qancin, waxaad ka heli kartaa kuwan cusub ee Tamarta Qalabka Nidaamka 'Energy Sistem Headphones' 2 iyaga oo adeegsanaya websaydhkooda rasmiga ah. Waxay leeyihiin dhameystiran dukaanka internetka oo aad ka heli karto kuwan Sameecadaha dhagaha 2 qiimahoodu yahay 29,90 euro, xog aan shaki ku jirin kan ugu xiisaha badan ee sameecadaha dhagaha la galiyo. Waad ogtahay, ma waxaad tahay dhagaystayaal run ah oo raadinaya codka saxda ah ee sameecadaha dhagaha? ka carar kuwan iyo wixii kale headset-ka Bluetooth; Ma waxaad dooneysaa inaad ku raaxeysato muusikadaada meel kasta oo waliba aad mooddo qiimo jaban? Energy Sistem Headphones 2 waa sameecadahaaga
Sameecadaha dhagaha ee 2 ee Nidaamka Tamarta
Suurtagalnimada adeegsiga iyaga oo leh fiilo
Dhawaaq xoogaa ka kooban
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Waxaan tijaabinay headphones-ka cusub ee tamarta maqalka 'headphones-ka badan
Khibradeyda aan u leeyahay Koofiyadahaan aad ayey u xumaayeen. Marka waxaan go aansaday inaan furo kadib markii aan u badalay kuwo cusub waxayna lahaan lahaayeen dhibaatooyin la mid ah kuwii hore. Arrintu waxay tahay gudaha, waa askar xun. Fiiladda isku xidhay koofiyadda bidix ayaa ahayd mid aan la iibin oo xidhiidh la samaysay markay rabto. Waxay sidoo kale bixiyaan aragti aad u liidata oo tayo leh. Xitaa iyadoo sidaas ah, ma aysan xallin dhibaatooyinka dhawaaqa. Xadhiggu aad buu u xun yahay oo waxay qaadataa wakhti in codka loogu gudbiyo afhayeenka dhinaca kale. Tani waa sababta oo ah waxay kaliya ka heshaa codka hal dhinac waxaana jira dib u dhac ku yimaada bilaabida codka. Waxaan sameeyay fiidyow si aad u aragto. On youtube-ka waxaad ka heli kartaa haddii aad dhigto: Dayactirka dhagaha dhagaha dhagaha. Dhamaan wanaag